Ubuchwepheshe obuqhamukayo | Martech Zone
Ukuthengisa okusafufusa kanye nemikhiqizo yokumaketha, izixazululo, amathuluzi, izinsizakalo, amasu, nemikhuba engcono kakhulu yamabhizinisi evela kubabhali be Martech Zone. Kufaka phakathi ubuhlakani bokwenziwa, ama-bots, ukucubungula ulimi lwemvelo, ukufunda ngomshini, into engekho ngokoqobo, njll.
I-Postaga: I-Intelligent Outreach Campaign Platform Powered by AI
ULwesibili, April 26, 2022 ULwesibili, April 26, 2022 Douglas Karr
Uma inkampani yakho yenza ukuxhumana nabantu, akungabazeki ukuthi i-imeyili iyindlela ebalulekile yokwenza lokhu. Kungakhathaliseki ukuthi ukuveza umshicileli noma ukushicilelwa kwendaba, i-podcaster yenhlolokhono, ukufinyelela kwezokuthengisa, noma ukuzama ukubhala okuqukethwe okuyigugu kwesayithi ukuze uthole i-backlink. Inqubo yemikhankaso yokuxhumana yilena: Khomba amathuba akho futhi uthole abantu abalungile ongabathinta. Thuthukisa iphimbo lakho kanye ne-cadence ukuze wenze eyakho
I-ApexChat: Phendula Ku-Webchat Yakho 24/7 Ngama-ejenti Engxoxo Anolwazi
Amakhasimende ethu ambalwa ajabule ngengxoxo abengayihlanganisa kumasayithi awo… kwaze kwaba yilapho sidalula izindaba ezimbi. Lapho sihlaziya ukuhola kwengxoxo esikutholile ukuthi abaholayo ababenokuxhumana okuqondile nommeleli ngokuvamile bavala ngemva kokuhlela i-aphoyintimenti neklayenti. Inkinga Ngengxoxo Yewebhu Amakhasimende aphendula kuphela engxoxweni ngokuqondile ngezikhathi zawo zomsebenzi. Noma iyiphi ingxoxo ngaphandle kwamahora okusebenza icele i-imeyili